မြင့်သော အရှိန် တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > တခုတည်းသော ခေတ္တ Pneumatic Actuator > မြင့်သော အရှိန် တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်ဘို့ integrated ဒီဇိုင်းတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် actuators နှင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် actuators အားလုံးသည်အမျိုးအစားအတူတူဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆုံးဦးထုပ်နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင် module ကိုအလွယ်တကူစမ်းတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် demounting ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator များအတွက် 2. နွေဦး။
ရှိပြီးသားအဆို့ရှင်များပေါ်တွင် install ထားပြီးဖြစ်သောနှစ်ခု AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်၏ဘေးထွက်မျက်နှာပြင်မှာ screw နှစ်ခုညှိဝါးတစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ယင်းအဆို့ရှင်အဖွင့်များ၏တည်နေရာများညှိနှိုင်းမှုစေနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့တိကျမှန်ကန်ပိတ်နိုင်ဘူး။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဆောက်လုပ်ရေး, အချိုးကျတဲ့အထိုင်အနေအထား, High-သံသရာဘဝနှင့်အစာရှောင်ခြင်း operation.Reverse လည်ပတ်မှုအတွက် 4. AOX ပစ္စတင်ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးဒီဇိုင်းကိုရိုးရှင်းစွာ piston inverting အားဖြင့်လယ်ပြင်၌ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။
ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအောက်တွင် AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator 30-50% သည်အဆိုပါအကြံပြုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်
အဆိုပါလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖိအား AOX-P ကို၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ကြွလာ ကနေနှစ်ခု piston အကြားစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) နှင့်ဆလင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆုံးဆီသို့ piston တွန်း ယင်းဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးချင်းစီကြီးစွန်းမှာစမ်းကျုံ့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေစဉ် ယင်းဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ piston နှင့်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်အကြားလေကြောင်းဖြန့်ချိနှင့်အတူ လေကြောင်းဝင်ပေါက်ကနေ (4) ထိုအတောအတွင်းည, piston ၏ထိန်သိမ်းက output ကိုမောင်း anticlockwise လှည့်ဖို့ရိုးတံ (ဂီယာဘီး) တစ်ပြိုင်နက်တည်း။ ညှနျကွားပြီးနောက် လေထုအရင်းအမြစ်ဖိအားစမ်းရေပေါက်တစ်ဦးချင်းစီမှာ, solenoid valve များကပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်များ၏ အဆုံးကို reset စတင်နှင့် piston အဆိုပါ elasticity နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့အတင်းအကျပ်နေကြတယ် လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) မှဖြန့်ချိနှစ်ခု piston အကြားလေကြောင်းနှင့်အတူ။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါ output ကိုရိုးတံ (ဂီယာဘီး) ကို piston ၏ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းလက်ယာရစ်လှည့်ရန်။ (ထို piston ကွဲပြားခြားနားအတွက်စုဝေးနေလျှင် တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေဦးတည်ချက်, ထို output ကိုရိုးတံပြောင်းပြန်အတွက်လှည့်ထွက်လှည့်လိမ့်မယ် စမ်းရေပေါက်ကို reset တဲ့အခါမှာဦးတည်ချက်, အမည်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောသရုပ်ဆောင် SO ရိုက်ထည့် reverse)
1. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator စက်ရုံမထွက်ခွာမီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
2. ကျနော်တို့ပြည်နယ် R & D ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစင်တာရှိသည်, အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်နှင့် AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပြီးဆုံးနိုင်ပါတယ်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
Q: မဆိုအသိအမှတ်ပြုသွင်းကုန်၏မရှိဘဲ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator အမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် တခုတည်းသော သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်